कुटनीति | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
भारतमा बलात्कार गरेर फरार अभियुक्त नेपालमा पक्राउ
काठमाडौं– भारतमा बलात्कार गरेर फरार अभियुक्तलाई नेपालमा पक्राउ गरिएको छ।
भारतको मुम्बईमा विवाहित महिलाको बलात्कार गरी प्रहार रहेका पश्चिम रुकुम चौरजहारी ७ का ३० वर्षीय मनबीर सुनारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले कात्तिक २ गते पक्राउ गरेको हो।
काठमाडौं । दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि सीलाई सेनाको एक टोलीले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा रिजर्भ
काठमाडाैं। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा रिजर्भ गरिएको छ। सीका लागि बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उक्त होटल पूरै रिजर्भ भएको होटलका एक उच्च व्यवस्थापकले जानकारी दिए।
२८२ वटा कोठा भएको होटलमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आउने प्रतिनिधिमण्डल…
साउनमा भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आएको तीन वर्षपछि भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक निमन्त्रणामा कोविन्द साउनमा नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ । भ्रमणको तयारीबारे मंगलबार भारतका विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेले दिल्लीस्थित नेपाली…
सुषमा, जयशंकर र नेपाल
भारतीय जनता पार्टीकी ६७ वर्षिय वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज मे २६, २०१४ बाट भारतको विदेशमन्त्री रहिन । उनको शालिन स्वभावले विदेश सम्बन्धहरू सामान्य रहे । कानुनकी विद्यार्थी स्वराजले केही समय भारतको सर्वोच्च न्यालयमा वकालत गरिन । दिल्लीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा…
नेपालको अमेरिकासँग बढ्दो ‘इगो’
काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय तिक्तता आएको छ । खासगरी नयाँ सरकार गठन भएपछि यस्तो तिक्तता बढेको हो ।
अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थका विविध विषयमा नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । तर, नेपालले त्यसलाई मानेको छैन ।…
भारतमा निर्वाचले नेपालमा तरंग: नयाँ सरकारसँगै नेपाल नीतिमा परिवर्तन !
काठमाडौं । भारतको सत्रौं लोकसभाका निम्ति सात चरणमा सम्पन्न भइराखेको आम निर्वाचन २०७६ जेठ ५ गते सम्पन्न हुँदैछ र ५ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७६ जेठ ९ गते परिणाम सार्वजनिक हुनेछ । भारतमा लोकसभा गठनका निम्ति भइराखेको यो…
दशैंभन्दा अघि नै चिनिया राष्ट्रपति सी नेपाल आउने संकेत
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणले नेपाललाई दुईवटा फाइदा ग¥यो । एउटा यातायात तथा पारवाहनका लागि चिनिया बाटो खुल्यो । अब चीनको बाटो हु“दै संसारका अन्य वजारमा पुग्न सकिने भयो । हिजोसम्म भारतको बजारमा सीमित नेपालको व्यापारिक बाटो…
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखाले विदेशस्थित १० दूतावास र ८३ मुलुक हेर्दै आएको छ।
अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अमेरिका, युरोपका सबै दूतावास यही महाशाखाअन्तर्गत पर्छन्। तर ती मुलुकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा एक सहसचिव, एक उपसचिव, एक अधिकृत र एक सुब्बा…
नेपाल र कम्बोडियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
कम्वोडिया । नेपाल र कम्बोडियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापार विस्तारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उद्योग, वाणिज्य…
ससुरा बा ! (कथा) 22 views
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 18 views
आज राति १२ बजेदेखि पर्यटकको उद्धार बन्द 12 views